भारतमा मुद्रास्फीति समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके भविष्यमा भयावह रूप लिन्छ : डा. राजन - Aarthiknews
एजेन्सी । आरबीआईका पूर्व गभर्नर डा. रघुराम राजनले भारतले जतिसक्दो चाँडो इन्क्रिमेन्टल बजेट नीतिबाट टाढा रहेर र उत्पादन वा कृषि जस्ता क्षेत्रका बारेमा मात्र सोच्न बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिमा ल्याउनको लागि रोडम्याप बनाउर्ने धारणा रहेको छ ।
एक अन्तर्वार्तामा राजनले यस समयमा भारतलाई न त धेरै आशावादी र न धेरै निराशावादी हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भने,‘कुनै पनि बजेटको उद्देश्य जनता र बजारप्रतिको विश्वास कायम राख्नु हो । अर्थतन्त्रलाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउने भन्ने बारे निश्चित रूपरेखा हुनुपर्छ। यो भरपर्दो हुनुपर्छ र देखिने पनि हुनुपर्छ। अन्यथा यो लापरवाही संकेत गर्छ ।’
यो बिन्दुमा आएर मागलाई समर्थन गर्न पनि आवश्यक छ । केन्द्र र राज्यले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । राजन भन्छन् ,‘यो सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि राज्यहरूले उनीहरूले गर्न सक्ने काम गरिरहेका छन् । किनभने त्यसो गर्दा निम्न स्तरमा मात्र रोजगारी सिर्जना हुनेछ । यतिबेला यसको नितान्त आवश्यकता छ ।’
यस्तो अवस्थामा टेलिमेडिसिन, टेलि–लवाइङ र एजुटेकजस्ता नयाँ क्षेत्रतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएका छन । राजनका अनुसार यी उद्योगहरूलाई वित्तीय नभई विश्वव्यापी मापदण्ड पूरा गर्ने डाटा सुरक्षाको राम्रो नियम चाहिने उल्लेख गरेका छन् ।
राजनका अनुसार भारतले उत्पादन वा कृषिको बारेमा मात्र सोच्न छोड्नुपर्छ । यसको सट्टा, यसले सेवाहरूको बारेमा कुरा गर्न सुरु गर्नुपर्छ जुन यसको ठूलो शक्ति हो । राजनले यस वर्षको बजेटमा अरु कुराभन्दा भिजन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने,‘म बजेट कागजात देख्छु कि यो हामीले अर्को पाँच वर्षमा लिने बाटो हो र हरेक वर्ष हामी यसलाई अलिकति अपडेट गर्छौं तर त्यो बाटो, त्यो दृष्टिकोण लगभग स्थिर देखिन्छ ।’
भारतसँग रहेको विदेशी मुद्राको बफर राम्रो भए पनि अन्य आर्थिक सूचकहरू पनि साथमा हुनुपर्ने राजन बताउँछन् । यी सूचकहरूमा तेल र सुनको आयात र ठूलो चालु खाता घाटा समावेश छ । पछिल्लो समय तेलको मूल्य बढेको र सुनको आयात बढ्दै गएकोले देशको चालु खाता घाटा बढेको छ । यो पक्कै पनि चिन्ताजनक स्तरमा पुगेको छैन । साथै, निर्यातले राम्रो प्रदर्शन गरेको छ । तर यसको मतलब भारतले अब बेवास्ता गर्न सक्छ भन्ने होइन ।
राजन भन्छन्, ‘ब्याजदरको गतिमा फेरि नजर राख्ने समय आएको छ । भारत र अन्यत्र प्रणालीमा तरलता धेरै छ । ब्राजिल जस्ता केही उदीयमान बजारहरू पहिले नै यसको मारमा परेका छन् । यो एक युग हो जहाँ सबै बजारहरू आपसमा गाँसिएका छन् । त्यसैले अमेरिकाले ब्याजदर बढाउने समयको लागि भारत तयार हुनुपर्छ ।’
उच्च मध्यम वर्गले धेरै राम्रो काम गरेको छ किनकि उनीहरूले महामारीको समयमा काम रोक्नु परेको छैन । जबकि निम्न मध्यम वर्गले धेरै पीडा भोगेको छन् । राजनले कृषि क्षेत्रमा बढ्दो रोजगारीको सङ्ख्यालाई उद्धृत गर्दै यो निकै अनौठो घटना भएकोले कुनै पनि विकासशील अर्थतन्त्रले कृषि रोजगारीमा वृद्धि नदेखिएको बताए ।
उनले भने, ‘महामारीले भारतमा रोजगारी हराएपछि उल्टो माइग्रेसन निम्त्यायो । भारतमा क्रेडिटबाट अहिले धेरै समस्याहरूमा फसेको छ । यस्तो अवस्थामा जनतालाई ऋण लिन मुस्किल परेको छ । बैंक आफैं फसेका छन् । जबकि क्रेडिट प्रवाह सबैभन्दा राम्रो छ । उनले भारतलाई ऋणको माग मात्र नभई आपूर्तिमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।
महामारीले शहरहरूमा काम गर्ने भारतका निम्न मध्यम वर्गका मानिसहरूको असुरक्षालाई उजागर ग¥यो । ग्रामीण भारतमा मनरेगा जस्तो नेटवर्क छ । तर सहरी भारतमा त्यस्तो केही छैन । त्यसैले मनरेगा जस्ता काम पाउनका लागि सहरका धेरै मानिसहरू उल्टो गाउँमा बसाइँ सरेका छन् । त्यसैले, महामारीको समयमा गाउँमा मनरेगाको माग बढ्यो । यस्तो अवस्थामा भारतलाई तुरुन्तै सहरी सुरक्षा योजना चाहिने उनले बताएका छन् ।
राजनका अनुसार मुद्रास्फीतिलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके भविष्यमा यसले भयावह रूप लिन्छ । राजन भन्छन्, ‘कुनै पनि देश मुद्रास्फीति संग सन्तुष्ट हुन सक्दैन र भारत यसको उदाहरण हो । आरबीआईले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।